I-Tolvanera: kuyini, izici, imvelaphi kanye nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinsuku ezome kakhulu nezishisa kakhulu zasehlobo ziyizimo ezifanele zokwakheka kothuli phansi. Lezi zinhlelo zothuli zaziwa ngegama le- ukuqhuma. Baziwa nangokuthi ngodeveli othuli ngoba bafinyelela ekuphakameni okukhulu futhi bayakwazi ukudala imimoya ebalulekile yomoya.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi nge-dustbin, ukuthi yakhiwa kanjani nokuthi inamiphi imiphumela.
2 Ukwakhiwa kwe-hopper
3 Umonakalo weChute
Ngezinsuku zasehlobo izindawo ziyoma kakhulu ngenxa yokushoda kwezimila. Kulokhu sengeza ukwehliswa komswakama oseduze futhi kuba izimo ezikahle zokwakheka kwezindawo zothuli phansi. Lezi zinhlelo zingakhiqiza umoya omkhulu ongadala umonakalo ohlukahlukene. I-dustbin ayilutho oludlula i-vortex yomoya efana nokubonakala kwesiphepho futhi ethola amanye amagama afana ne-revolvín, i-wind campfire, phakathi kwamanye.
Kungukuvuselelwa komoya okushintshana ngosayizi oguqukayo. Isikhathi esiningi i-hopper incane ngosayizi nangesikhathi esifushane. Imvamisa iba cishe uhhafu wemitha ububanzi futhi ibe ngamamitha ambalwa kuphela ukuphakama. Isikhathi ngokuvamile sicishe sibe yimizuzu embalwa. Kodwa-ke, kunezikhathi lapho ingaba mkhulu kakhulu futhi ibe namandla kakhulu. Kwesinye isikhathi ingakhuphuka ifike kumamitha ayi-1.000 100 ukuphakama futhi ikhiqize imimoya ezungeze yona ifike kumakhilomitha ayi-XNUMX ngehora. Ama-eddy afinyelela ku-20 min kwesinye isikhathi atholiwe.
Lezi zakhiwo zothuli zenzeka lapho umoya oshisayo useduze nobuso. Umoya oshilo, oshisayo, awuminyene kakhulu futhi uvame ukukhuphuka ngokushesha. Uma isifinyelele ezindaweni eziphakeme ithola umoya obandayo onambitha ngaphezulu. Uma izimo zemvelo zifanelekile, i-updraft iqala ukuzungeza ngomphumela obizwa ngeCoriolis. Umphumela weCoriolis ungenxa yokujikeleza komhlaba uqobo. Njengoba umoya okhuphukayo ukhuphuka ngokuzumayo, ikholomu yomoya iqala ukwelula ngokuqondile futhi ibangele umphumela oqinile wokujikeleza ngenxa yenqubo ebonakalayo yokongiwa komfutho we-angular.
Ungasho ukuthi ikhubhu lifana noshimula lapho umoya oshisayo uhamba kakhulu futhi uye phezulu njengoba ujikeleza ngaphakathi kwawo. Njengoba umoya oshisayo ukhuphuka ulahlekelwa amandla awo futhi uyeke ukukhuphuka. Ngale ndlela, iqala ukwehla kwayo kusukela ngaphandle komnyombo we-eddy. Ukwehla komoya obandayo kuqala ukulinganisa umoya ofudumele owawuzungeza ubheke phezulu ngaphandle. Ngale ndlela, unesistimu ezinzile ngokuphelele.
Kungashiwo ukuthi i-hopper ingagcinwa iyodwa njengoba iguquka emhlabathini oshiswe kakhulu. Imvamisa ijwayele ukukhula endaweni ewugwadule, ehlane noma ye-asphalt. Lezi zinhlobo zenhlabathi zabelana ngesici esivamile sokukwazi ukushisa kalula ngenxa yesenzo semisebe yelanga. Njengoba umoya ofudumele ngokwedlulele oseduze kwawo uhlaziywa engxenyeni ephezulu kakhulu kofeleba, umoya opholile ovela endaweni ezungezile ugcina ngokungeniswa kuwo. Lapho lokhu kumunca kwenzeka, i-hopper iyashabalala ngemizuzwana nje. Ngokuvamile lokhu kwenzeka lapho ukuskrola kungasheshi ngokwanele ukugcina isivinini. Kungenzeka futhi ukuthi umgqomo wokulahla udoti uyanyamalala lapho weqa indawo yomhlaba lapho amazinga okushisa aphansi phansi.
Amandla ashayela ngemuva kukakhokho yizinga lokushisa eliphakeme lomhlaba ukuvumela umoya oshisayo ukuthi ukhuphuke.
Manje sesizobona umonakalo ongase ubangelwe yi-dustbin ngesenzo sayo nangokuvezwa kwayo. Ukuchayeka othulini lwe-dustbin kungadala izimo zezempilo ezahlukahlukene ezinjengezinto ezibangela ukungezwani komzimba nomzimba, umthelela emasosheni omzimba, imiphumela emibi esikhumbeni, emehlweni nase-mucosa. Ngenxa yokuvezwa yile nto, eminye imiphumela ingavela njenge ukuphefumula okuncane, i-tonsillitis, i-pharyngitis, i-bronchitis, i-pneumonia, i-asthma, izimo zenhliziyo, isifo sohudo nokunye okunye.
Ezindaweni lapho i-tolvanera ivame kakhulu, kunezinkinga zokungayi emsebenzini esikoleni nasemsebenzini nokwenyuka kwemali esetshenziswayo kwezempilo nasezibhedlela. Isibonelo salokhu indawo esentshonalanga etholakala ezansi kwentaba yaseMaribios. Ingenye yezindawo ezingcoliswe kakhulu ezweni eseyenziwe inqubo yokugawulwa kwamahlathi isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-50. Njengoba bekulindelekile, le nqubo eqhubekayo yokugawulwa kwamahlathi idale izindawo ezingekho esimeni sendawo enesomiso esikahle ekwakhekeni kwalesi simo sezulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele sengeze iqiniso lokuthi lezi zindawo sezihlale zifakwa ebhodini njalo njalo ngezinto ezinobuthi lapho sithola khona izibulala-zinambuzane, ukhula kanye nomanyolo. Wonke la makhemikhali enza umonakalo omkhulu ekuvundeni kwenhlabathi futhi aguqule izindawo ezivundile kakhulu zibe izindawo ezomile.
Njengoba sibonile ekuqaleni kwalesi sihloko, yilezi zindawo ezifanele ukwenziwa kothuli. Uthuli oluvela emhlabathini owomile kakhulu yilolo oluphethe izinsalela zezinto ezinobuthi eziyingozi empilweni. Okufanayo kwenzeka ngamagciwane kanye nama-virus, impova, izinhlamvu, izingcezu zezitshalo nezinambuzane ezithinta ikakhulukazi izingane, abesifazane abakhulelwe kanye nabantu abadala. Ngakho-ke, i-hopper ikhiqiza impuphu okufanele ithathwe ukuze kutholakale impilo.
Imiphumela yesibili ebangelwa ukulahla kufanele ibhekwe. Ngonyaka owodwa nje, kwabikwa abantu abangaphezu kuka-3000 XNUMX abathintekile esifundeni iPacific nasenyakatho nenyakatho yezwe.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi yini i-dustbin nokuthi iyini imiphumela yayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-Hopper